Ezona oscilloscopes kwiiprojekthi zakho zombane | izixhobo zasimahla
UIsake | 06/05/2022 09:00 | Ukuhlaziywa ukuba 08/03/2022 13:04 | Izinto zombane
Ukuba ufuna ukuseta ilabhoratri yombane, esinye sezixhobo eziyimfuneko ekungafuneki ukuba singabikho ziioscilloscopes. Ngabo awunakuthatha imilinganiselo ethile nje kuphela iipholima, kodwa uya kubona iziphumo zegraphic kwi-analog kunye ne-digital signals. Ngokungathandabuzekiyo esinye sezona zixhobo zinobuchule kwaye zisetyenzisiweyo kwiibhubhoratri zombane, kwaye apha siza kukubonisa ukuba yintoni kanye kanye, indlela yokukhetha eyona ifanelekileyo kuwe, kwaye sincoma ezinye iimpawu kunye neemodeli ezinexabiso eliphezulu lemali.
Nangona uninzi lwezi oscilloscopes alunayo inkxaso esemthethweni yezinye iinkqubo zokusebenza ezifana neLinux, inyaniso kukuba kukho iiprojekthi eziya kukuvumela ukuba uzisebenzise kweli qonga, njenge. VulaHantek kwiHantek, DSRemote kuba Rigols, okanye le Enye indlela yeSiglent. Kwimeko yokungabi neeprojekthi zolu hlobo, ungasoloko usebenzisa umatshini onenyani oneWindows kwinkqubo yakho yokusebenza.
1 eyona oscilloscopes
1.1.1 Rigol DS1102Z-E (ixabiso elingcono)
1.1.2 Rigol DS1054Z (uluhlu oluphakathi)
1.1.3 I-Rigol MSO5204 (eyona nto isetyenziswa kubuchwephesha)
1.2.1 I-Hantek 6022BE (idijithali ephantsi)
1.2.2 Hantek DSO5102P (uluhlu oluphakathi)
1.2.3 I-Hantek 6254BD (yeyona yedijithali yokusetyenziswa kobuchwephesha)
1.3 Uphawu oluthe cwaka
1.3.1 I-SDS 1102CML engabonakaliyo (ukhetho olufikelelekayo ngakumbi)
1.3.2 Uthotho lweSDS1000X-U olungabonakaliyo (uluhlu oluphakathi)
1.3.3 Siglent SDS2000X Plus Series (yeyona isetyenziswa kubuchwephesha)
1.4 ii-oscilloscopes eziphathwayo
1.4.1 Uthotho lwe-SHS800 olungabonakaliyo (i-oscilloscope yobuchwephesha ephathwa ngesandla)
1.4.2 HanMatek H052 (elona xabiso lemali)
2 Yintoni i-oscilloscope?
2.1 Iimpawu zomqondiso
2.2 Amacandelo Oscilloscope
2.3 Ukhuseleko lweOscilloscope
4 Iintlobo ze-oscilloscopes
5 Indlela yokukhetha eyona oscilloscope
Ukuba awusazi ukuba sesiphi isixhobo omawusithenge, naku uya ukhetho olunezona oscilloscopes ezilungileyo ungathenga ntoni. Kwaye kukho abaqalayo, abavelisi kunye neengcali, ezinoluhlu lwamaxabiso olwahluke kakhulu. Kolu khetho, ndikhethe iibrendi ezi-3 ezilungileyo, kwaye kuzo zonke iimodeli ezi-3 ezahlukeneyo zibonelelwa: inketho engabizi kakhulu kunye neyoqoqosho yabaqalayo kunye nabasaqalayo, uluhlu oluphakathi, kunye nenketho ebiza kakhulu kwiingcali.
Rigol DS1102Z-E (ixabiso elingcono)
I-Rigol inezinye ze-oscilloscopes zedijithali ezingcono kakhulu onokuzifumana, njengale modeli yohlobo lwedijithali, kunye neziteshi ezi-2, i-100 Mhz, i-1 GSa / s, i-24 Mpts kunye ne-8-bits. Ivumela ukusondeza kwindawo ekhethiweyo, ukukwazi ukuskrola, uqhagamshelo olumangalisayo, isantya sokubamba ifom yamaza ukuya kuthi ga kwi-30.000 wfms/s, ukukwazi ukubonisa kunye nokuhlalutya ukuya kuthi ga kwi-60.000 yeefom ezirekhodiweyo zamaza. Konke okubonakalayo kwisikrini sayo esikhulu se-7 ″ sombala kunye nephaneli ye-TFT kunye nesisombululo se-WVGA (800 × 480 px), ukukhanya okulungelelaniswayo, uluhlu lwesikali esithe nkqo ukusuka kwi-1mV / div ukuya kwi-10V / div, uxhumano lwe-USB, i-2 probes kunye neentambo ezifakiwe, njl. .
Rigol DS1054Z (uluhlu oluphakathi)
Le yenye yezona oscilloscopes zedijithali. I-Rigol idale isixhobo esimangalisayo kunye neziteshi ze-4 endaweni yezimbini ezifana neyokuqala. Eneempawu ezinomdla ngokwenene, ezifana ne-150 Mhz, 24Mpts, 1Gsa/s, 30000 wfms/s, kunye nokuba nezinto ezibangelayo, ukuguqula iikhowudi, inkxaso yezitshisi ezahlukeneyo, uqhagamshelo lwe-USB, kunye nokwabelana nezinye izinto ezininzi ngale yangaphambili, njenge. i-intshi ezisi-7 kunye nesisombululo se-800×480 px, uluhlu lwayo lwesikali, njl. Iya kulinganisa ngokuzenzekelayo ukuya kuthi ga kwiiparamitha ze-waveform ye-37, kunye neenkcukacha zokunyuka kunye nexesha lokuwa, i-wave amplitude, ububanzi be-pulse, umjikelo womsebenzi, njl.
I-Rigol MSO5204 (eyona nto isetyenziswa kubuchwephesha)
I-Rigol MSO5204 yenye yezona oscilloscopes ezinomdla kakhulu. Esi sixhobo siza namajelo ama-4, 200 Mhz, 8 GSa/s, 100 Mpts, kunye ne-500000 wfms/s. Ibandakanya i-9 ″ yombala wescreen sokuchukumisa (i-multi-touch), enepaneli ye-LCD enecapacitive, kunye nehardware enamandla amangalisayo. Iya kubamba kwaye imele nezona nkcukacha zincinci. Esi sikrini sinesisombululo esihle, kunye nokuzinza kombala, kunye nokuya kuthi ga kumanqanaba angama-256 ukulungelelanisa. Unokulinganisa ngokuzenzekelayo ukuya kuthi ga kwi-41 yeeparamitha ezahlukeneyo zamaza kwinkumbulo. Kule meko, uya kukwazi ukusebenzisa ujongano ezahlukeneyo, ezifana LAN, USB, HDMI, njl.
I-Hantek 6022BE (idijithali ephantsi)
Le Hantek ixabisa kakhulu, idijithali, kwaye iqhagamshela nge-USB kwiPC. Ayibandakanyi isikrini, kodwa ibandakanya isoftware (ebandakanyiweyo kwiCD) yokuyifaka kwiWindows kwaye ukwazi ukwenza imiboniso ngescreen sekhompyuter yakho ngale software. Yenzelwe umgangatho ophezulu we-anodized aluminiyam. Inayo i-48 MSa / s, i-20 Mhz bandwidth, kunye ne-2 channels (16 logical).
Hantek DSO5102P (uluhlu oluphakathi)
Le enye i-oscilloscope yohlobo lweHantek inaso isikrini sombala, esinobukhulu be-17,78 cm diagonal kunye nesisombululo se-WVGA se-800 × 480 px. Inonxibelelwano lwe-USB, iziteshi ze-2, i-1GSa / s yesampula yexesha langempela, i-100Mhz bandwidth, ubude ukuya kwi-40K, imisebenzi emine yezibalo onokukhetha kuyo, i-edge ekhethiweyo / i-pulse ububanzi / umgca / i-slop / i-trigger ixesha elingaphezulu, njl njl. Uhlalutyo lwexesha lokwenyani software yePC ibandakanyiwe.
I-Hantek 6254BD (yeyona yedijithali yokusetyenziswa kobuchwephesha)
UHantek unalo nenye imodeli, yenye yezona oscilloscopes zibalaseleyo zokusetyenziswa kubuchwephesha. Inketho yedijithali, kunye noqhagamshelo lwe-USB, i-250 Mhz, i-1 GSa / s, iziteshi ezi-4, i-waveform engafanelekanga, uvakalelo lwegalelo layo ukuya kwi-2 mV-10V / div, kulula ukuyiphatha, ukuyifaka lula (Iplagi & Dlala), iphelele kakhulu. kunye nemisebenzi ephezulu, eyenziwe nge-aluminiyam ye-anodized ye-casing, kunye nethuba lokubukela, ukugcina, kunye nokwenza zonke iintlobo zemisebenzi kwisikrini se-PC ngenxa yesofthiwe yayo.
Uphawu oluthe cwaka
I-SDS 1102CML engabonakaliyo (ukhetho olufikelelekayo ngakumbi)
I-SDS 1102CML engacacanga -...
Le enye yenye yezona zinto zifikelelekayo onokuzifumana phantsi kophawu lweSiglent. Le mifuziselo ye-oscilloscope inombala we-7 ″ wesikrini se-LCD ye-TFT, kunye nesisombululo se-480×234 px, ujongano lwe-USB, kunye nesoftware yePC ukujonga ukude kunye nokuhlalutya yonke into ngesikrini, 150 Mhz ububanzi bebhendi, 1 GSa/s, 2 Mpts. , kunye nomjelo ophindwe kabini.
Uthotho lweSDS1000X-U olungabonakaliyo (uluhlu oluphakathi)
Yimodeli ephakathi eSiglent, eneziteshi ezi-4, uhlobo lwedijithali, i-100 Mhz bandwidth, i-14 Mpts, i-1 GSa / s, i-7-inch TFT LCD isikrini kunye nesisombululo se-800 × 480 px, i-super phosphor, kunye ne-decoders ye-interfaces ezininzi. , kulula kakhulu ukusebenzisa umbulelo kwiphaneli yayo yangaphambili, inkqubo entsha eneteknoloji ye-SPO yokuphucula ukuthembeka kunye nokusebenza, uvakalelo oluphezulu, i-jitter ephantsi, ibamba ukuya kuthi ga kwi-400000 wfmps, ukuqina okuguquguqukayo kumanqanaba angama-256, indlela yokubonisa ubushushu bombala njl.
Siglent SDS2000X Plus Series (yeyona isetyenziswa kubuchwephesha)
Ukuba ufuna iSiglent yokusetyenziswa kobuchwephesha, le enye imodeli yile nto uyifunayo. Isixhobo esinesikrini esikhulu se-10.1 ″ sokucofa okuninzi ukujonga imiqondiso kunye nedatha. Nge-smart trigger (i-edge, i-slope, i-pulse, ifestile, i-runt, ikhefu, ukuyeka, ipateni kunye nevidiyo). Ineziteshi ezi-4 kunye ne-16 yedijithali, i-350 Mhz bandwidth, i-200 Mpts yememori ubunzulu, ukuchaneka kwamandla ombane ukusuka kwi-0.5 mV / div ukuya kwi-10V / div, iindlela ezahlukeneyo, i-2 GSa / s, kunye nomthamo we-500.000 wfm / s, amanqanaba angama-256 ahlengahlengiswayo. , umboniso wobushushu bombala, itekhnoloji ye-SPO yokuphucula ukuthembeka, kunye nokupakishwa ngeempawu eziphambili.
Ngqongqo SHS800 uthotho (oscilloscope yobuchwephesha ephathwa ngesandla)
I-Oscilloscope yoBuchule beHandheld ene-2 ​​Channels, 200Mhz Bandwidth, 32Kpts Ubunzulu beMemori, 6000 Bala uBonisa ngoMlinganiselo ochanekileyo, iiGrafu eziTrendi ukuya kuthi ga kwiMilinganiso eyi-32, i-800K yeeNqaku, i-24 yeyure yokuRekhoda okukhulu, kunye nexesha elikhulu lokuRekhoda. Kwakhona, inexesha lokurekhoda le-0.05 Sa / s.
HanMatek H052 (elona xabiso lemali)
I-oscilloscope yesayizi encinci ene-3.5 ″ TFT isikrini, kunye nomsebenzi we-multimeter (2 ku-1). Isikrini silayitiwe ngasemva, sinomsebenzi wokuzilinganisa, ukuya kuthi ga kwi-avareji ezenzekelayo e-7, ukuya kuthi ga kwi-10000 wfms/s, 50 Mhz, 250 MSa/s, amanqaku okurekhoda e-8K, amaxabiso asebenzayo ngexesha lokwenyani, i-multimeter ezimeleyo kunye i-oscilloscope inputs, i-USB interface -C yamandla kunye nokutshaja, njl.
ii-oscilloscopes Zizixhobo zombane ezisetyenziselwa ukumela izinto ezahlukeneyo zombane kwiscreen seLCD. yesekethe, imiqondiso ngokubanzi eyahluka ngexesha elimelwe kwi-axis yolungelelwaniso (X kwi-axis yexesha ukubona ukuvela komqondiso kunye ne-Y axis i-amplitude yomqondiso imelwe kwii-volts, umzekelo). Zibalulekile kwintsimi ye-elektroniki ukuhlalutya iisekethe kunye nokujonga amaxabiso omqondiso (i-analog okanye idijithali), kunye nokuziphatha kwabo.
Ii-Oscilloscopes zineeprobe okanye iingcebiso zokufumana imiqondiso yesekethe efundwayo. I-elektroniki ye-oscilloscope iya kukhathalela bamele ngokubonakalayo kwikhusi, ukujonga amaxesha ngamaxesha utshintsho (isampuli), kwaye ngokusebenzisa ulawulo lwe-trigger kuya kwenzeka ukuba kuzinziswe kwaye kubonise ukuphindaphinda okuphindaphindiweyo.
Isampuli: yinkqubo yokuguqula inxalenye yomqondiso ongenayo kwinani lamaxabiso ombane ahlukeneyo ukuze uyigcine kwimemori, uyiqhube kwaye uyibonise ngokuyimela esikrinini. Ubungakanani benqaku lesampuli nganye buya kufana nobukhulu besignali yegalelo ngexesha umqondiso wesampuli. La manqaku acwangcisiweyo kwisikrini anokutolikwa njengeefomati zamaza ngokusebenzisa inkqubo eyaziwa ngokuba yi-interpolation, edibanisa amanqaku ukwenza imigca okanye i-vectors.
Iimbumbulu: Isetyenziselwa ukuzinzisa kunye nokubonisa i-wave waveform ephindaphindiweyo. Kukho iintlobo ezininzi ezinjengokubangela i-edge triggering, ukugqiba ukuba umda uyanyuka okanye uwela kwisignali, efanelekileyo kwisikwere okanye izibonakaliso zedijithali. I-Pulse wide triggering ingasetyenziselwa ukuhlalutya imiqondiso enzima ngakumbi. Kukho nezinye iindlela, ezifana ne-trigger enye, apho i-oscilloscope iya kubonisa kuphela umkhondo xa isignali yegalelo idibana neemeko ze-trigger, ukuhlaziya umboniso kunye nokuqhwala ukugcina umkhondo.
IiOscilloscopes zinokuthatha uthotho lwe iparameters zomqondiso omawuzazi:
incopho kwixabiso eliphezulu
Ubuninzi bomqondiso (zombini eziphantsi neziphezulu)
Amaxesha ophawu lokunyuka nokuwa
Yahlula isignali kwingxolo enokuthi idityaniswe
Bala amaxesha okusasaza kwiisekethe ze-microelectronic
Bala iFFT yophawu
Bona utshintsho lwe-impedance
Ngokuphathelele iindawo ezisisiseko ze-oscilloscope ekufuneka uyazi ukuze ukwazi ukuyiphatha, zezi:
Kusenokubakho umahluko phakathi kweemodeli, kodwa ezi zidla ngokuba zezona ziqhelekileyo.
Isikrini: yinkqubo yokumelwa kwemiqondiso kunye namaxabiso. Lo mboniso wawukade uyi-CRT kwii-oscilloscopes ezindala, kodwa kwii-oscilloscopes zale mihla ngoku ngumboniso wedijithali we-TFT LCD. Ezi zikrini zinokuba nobukhulu obahlukeneyo, kunye nezigqibo ezahlukeneyo, njengeVGA, WXGA, njl.
inkqubo ethe tye: unoxanduva lokubonelela ngesixokelelwano somelo ngolwazi lomqondiso we-Y okanye i-axis ethe nkqo. Idla ngokumelwa kumphambili we oscilloscope kwaye inezowuni yayo yolawulo ebhalwe VERTICAL. Umzekelo:
Ubungakanani okanye inzuzo ethe nkqo: Lungisa uvakalelo oluthe nkqo okanye olungaguquguqukiyo kwiivolthi/ulwahlulo. Kuya kubakho ulawulo lwejelo ngalinye le-oscilloscope enalo. Umzekelo, ukuba ukhetha i-5V/div ke icandelo ngalinye lesikrini liya kumela i-5 volts. Kufuneka uyilungelelanise ngokusekelwe kumbane wesignali, ukwenzela ukuba imelwe ngokufanelekileyo kwigrafu.
Imenyu: ikuvumela ukuba ukhethe phakathi koqwalaselo oluhlukeneyo lweshaneli ekhethiweyo, njenge-impedance yegalelo (1x, 10x,...), ukudibanisa isignali (GND, DC, AC), inzuzo, imida ye-bandwidth, inversion yeshaneli (inverts polarity), njl.
Posición: ngumyalelo osetyenziselwa ukususa umkhondo wophawu ngokuthe nkqo kwaye uyibeke apho ufuna khona.
I-FFT: Uguqulo olukhawulezayo lweFourier, ukhetho lokusebenzisa umsebenzi wezibalo ukwenza uhlalutyo lwembonakalo yomqondiso. Ke unokubona umqondiso uqhekeke ube yi-frequency esisiseko kunye neeharmonics.
IMathematika: Iioscilloscopes zeDijithali zihlala zibandakanya olu seto ukukhetha imisebenzi eyahlukeneyo yemathematika ukuyifaka kwimiqondiso.
inkqubo ethe tyaba: yidatha emelwe ngokuthe tye, kunye nejenereyitha yokutshayela esetyenziselwa ukulawula isantya sokutshayela kwaye inokulungiswa ngexesha (ns, µewe, ms, imizuzwana, njl.). Zonke iisetingi okanye ulawulo lwale X axos zidityaniswe kwindawo enelebhile ethi HORIZONTAL. Umzekelo, kuxhomekeke kwimodeli onokuyifumana:
Posición: ikuvumela ukuba uhambise imiqondiso ecaleni kwe-X axis ukuyilungisa, umzekelo, beka uphawu ekuqaleni komjikelo, njl.
Isikali: Apha kulapho iyunithi yexesha kwicandelo ngalinye lesikrini (s/div) inokusetwa. Umzekelo, ungasebenzisa enye ye-1 ms/div, eya kwenza ulwahlulo ngalunye lwegrafu lumele ubude bexesha lemillisecond enye. I-Nanoseconds, i-microseconds, i-milliseconds, imizuzwana, njl. Olu lawulo lunokuqondwa njengoluhlobo lwe "zoom", ukuhlalutya iinkcukacha zemizuzu yomqondiso ngomzuzu omncinci.
Ukufunyanwa: Idatha efunyenweyo iguqulelwa kwifomathi yedijithali, kwaye oku kunokwenziwa ngeendlela ezi-3 ezinokwenzeka kwaye kuya kuchaphazela isampuli, oko kukuthi, isantya apho idatha ifunyenwe khona. Iimowudi ezintathu zezi:
Isampuli: Iisampulu zesiginali yegalelo ngamaxesha aqhelekileyo, kodwa ingaphoswa utshintsho oluthile olukhawulezayo kuphawu.
Umyinge: Le yimowudi ecetyiswa kakhulu xa kufunyanwa uthotho lweefomati zamaza, kuthatha iavareji yazo zonke kwaye ibonise isiphumo sophawu kwiscreen.
Ukufunyanwa kwencopho: ifanelekile ukuba ufuna ukunciphisa ingxolo edityanisiweyo enophawu olunokuba nayo. Kule meko, i-oscilloscope iya kujonga amaxabiso aphezulu kunye nobuncinci bomqondiso ongenayo, ngaloo ndlela imele umqondiso kwiipulses. Nangona kunjalo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo, njengoko kule modi ingxolo edityanisiweyo inokubonakala inkulu kunokuba injalo.
Trigger: inkqubo yetrigger ibonisa xa sifuna ukuba uphawu luqale ukuzoba kwiscreen. Umzekelo, khawucinge ukuba usebenzise isikali sexesha eli-1 µs kunye negrafu ye-X-axis yexesha inezahlulo ezili-10 ezithe tye, emva koko i-oscilloscope iya kucwangcisa iigrafu ezingama-100.000 ngomzuzu, kwaye ukuba nganye iqala kwindawo eyahlukileyo iya kuba sisiphithiphithi. Ukuze oku kungenzeki, kweli candelo unokwenza oko. Olunye ulawulo lu:
Imenyu: umkhethi wokhetho olwahlukileyo okanye iindlela zokudubula ezinokwenzeka (ngesandla, esizenzekelayo,...).
Inqanaba okanye iNqanaba: le potentiometer ivumela ukulungelelanisa inqanaba le-trigger yomqondiso.
amandla okuqalisa: nyanzelisa ukudubula ngeli xesha lokuyicinezela.
probes: ziitheminali okanye iindawo zovavanyo eziya kuqhagamshelwana namalungu esixhobo okanye iisekethe eziza kuhlalutywa. Kufuneka banele, ngaphandle koko intambo edibanisa i-probe kwi-oscilloscope inokusebenza njenge-eriyali kwaye ithathe iimpawu ze-parasitic kwiifowuni ezikufutshane, izixhobo zombane, irediyo, njl. Iiprobes ezininzi ziza ne-potentiometer ukubuyisela le miba kwaye zifuna ukulinganisa ukubonisa amaxabiso achanekileyo kumboniso, ngokuhambelana nezikali ezikhethiweyo kwi-axes yokubonisa.
Enye inkalo ebalulekileyo xa usebenzisa i-oscilloscope kwilabhoratri kukugcina engqondweni amanyathelo okhuseleko ukuze ungagqibi ukonakalisa isixhobo okanye ngeengozi ezinokukuchaphazela. Kuhlala kubalulekile ukufunda incwadi yomenzi ukuhlonipha iingcebiso zokhuseleko kunye nokusetyenziswa. Eminye imigaqo eqhelekileyo kuzo zonke iimodeli zezi:
Kuphephe ukusebenza kwindawo ezineemveliso ezinokutsha okanye eziqhumayo.
Nxiba izixhobo ezikhuselayo ukuze ugweme ukutshisa okanye ukutshatyalaliswa kombane.
Ground yonke imihlaba, zombini i-oscilloscope probe kunye nesekethe phantsi kovavanyo.
Sukuchukumisa amacandelo esekethe okanye iingcebiso ezingenanto zeprobe eziphilayo.
Soloko uqhagamshela isixhobo kuthungelwano lonikezelo lwamandla olukhuselekileyo nolusekelwe phantsi.
Ukuba awukamfumani isicelo Kwesi sixhobo, kufuneka wazi yonke into ekuvumela ukuba wenze i-oscilloscopes kwilabhoratri yakho yombane:
Ubungakanani bomlinganiselo wesignali
Umyinge wokutshintsha kwesigaba semiqondiso emibini
Imilinganiselo ye-XY kusetyenziswa amanani e-Lissajous
Ewe, kwaye oku kubonakaliswa ngendlela esebenzayo ngakumbi, ingasetyenziselwa:
Jonga izixhobo ze-elektroniki, iintambo okanye iibhasi
Ukuchonga iingxaki kwisekethe
Jonga i-analog okanye imiqondiso yedijithali kwisekethe
Ukumisela umgangatho weempawu zombane kwiinkqubo ezibalulekileyo
Ukubuyisela umva ubunjineli bezixhobo zombane
Kwaye ii-oscilloscopes zinokuhamba ngaphaya kombane kwaye zisebenzise iipropathi zazo zokulinganisa imiqondiso ethile yombane ukuyiguqula kwaye ibeke iliso kwiiparamitha ze-biomedical yezigulane esibhedlele, ezifana noxinzelelo lwegazi, izinga lokuphefumula, umsebenzi we-nerve yombane, njl. Isenokusetyenziswa ukulinganisa amandla esandi, iintshukumo, nokunye
Kukho ezahlukeneyo iintlobo ze-oscilloscopes. Umzekelo, kuxhomekeke kwindlela imilinganiselo yesiginali ithathwa ngayo, sinazo:
Analog: I-voltage elinganiswe ngama-probes iya kuboniswa kwisikrini se-CRT, ngaphandle kokuguqulwa kwe-analog ukuya kwidijithali. Kwezi, iisignali ze periodic ziyabanjwa, lo gama izinto ezidlulayo azidli ngokuboniswa kwiscreen, ngaphandle kokuba ziphindaphindwa ngamaxesha athile. Ukongeza, olu hlobo lwe-oscilloscope lunemida, njengokuba lungabambi iimpawu ezingezizo ixesha, xa zibamba izibonakaliso ezikhawuleza kakhulu zinciphisa ukukhanya kwesikrini ngenxa yokunciphisa izinga lokuhlaziya, kunye neempawu ezicotha kakhulu. ayizukwenza umkhondo (kuphela inokuba kwiityhubhu ezizingise kakhulu).
yedijithali: zifana nezangaphambili, kodwa bafumana isibonakaliso se-analog ngeprobe kwaye bayiguqule kwidijithali ngokusebenzisa i-ADC (A / D Converter), eya kucutshungulwa ngedijithali kwaye iboniswe kwisikrini. Okwangoku zezona zixhaphake kakhulu zinikwe izibonelelo zazo, njengokukwazi ukuqhagamshela kwiPC ukuhlalutya iziphumo usebenzisa isoftware, ukuzigcina, njl. Kwelinye icala, ngokubonga kwiisekethe zabo banokongeza imisebenzi esweleyo i-analog, njengomlinganiselo ozenzekelayo wexabiso lencopho, imiphetho okanye izithuba, ukubanjwa okwethutyana, kunye nokubala okuphezulu okunje ngeFFT, njl.
Zisenokufakwa kwikhathalogu ngokuphatheka okanye ukusetyenziswa kwayo:
i-oscilloscope ephathekayo: zizixhobo ezixineneyo kunye nezilula, ukuququzelela ukuzithatha ukusuka kwindawo ukuya kwenye ukwenza imilinganiselo. Banokuba nomdla kumagcisa.
ILabhoratri okanye i-oscilloscope yoshishino: zikhulu, izixhobo zebhentshi, zinamandla ngakumbi kwaye ziyilelwe ukuba zishiywe kwindawo emiselweyo.
Ngakolunye uhlangothi, ngokweteknoloji esetyenzisiweyo, umntu unokwahlula phakathi:
I-DSO (I-Digital Storage Oscilloscope): Le oscilloscope yokugcina yedijithali isebenzisa inkqubo yokucwangcisa i-serial. Lolona hlobo luqhelekileyo phakathi kwee-oscilloscopes zedijithali. Banokuthi babambe iziganeko ezidlulayo, bazigcine kwiifayile, bazihlalutye, njl.
I-DPO (I-Digital Phosphor Oscilloscope): Ezi azikwazi ukubonisa inqanaba lokuqina kwesignali ngexesha langempela njengoko kwenzeka kwi-analog, kodwa ukuba i-DSO ayikwazi. Yiyo loo nto i-DPO yadalwa, eyayiseyidijithali kodwa yayisombulula loo ngxaki. Oku kuvumela ukubamba umqondiso ngokukhawuleza kunye nohlalutyo.
Yesampulu: rhweba i-bandwidth ephezulu kuluhlu olusezantsi oluguquguqukayo. Igalelo alinyanzelwanga okanye likhuliswe, likwazi ukuphatha uluhlu olupheleleyo lwesignali. Olu hlobo lwe-oscilloscope yedijithali lusebenza kuphela ngemiqondiso ephindaphindiweyo, kwaye ayikwazi ukubamba i-transients ngaphaya kwereyithi yesampuli eqhelekileyo.
I-MSO (Uphawu oluxutyiweyo lweOscilloscope): Ziyi-hybridization phakathi kwe-DPO kunye ne-16-channel logic analyzer, kubandakanywa ukucacisa kunye nokusebenza kwe-parallel-serial bus protocol. Zezona zilungele ukujonga kunye nokulungisa iisekethe zedijithali.
PC esekelwe: Ikwaziwa ngokuba yi-USB oscilloscope njengoko ingenawo umboniso, kodwa ixhomekeke kwisoftware yokubonisa iziphumo ezisuka kwiPC eqhagamshelweyo.
Nangona kunokubakho ezinye iindidi, ezi zezona zidumileyo, kwaye ezo uya kuzifumana ngokwesiqhelo.
Indlela yokukhetha eyona oscilloscope
Ngexesha le khetha i-oscilloscope elungileyo, kufuneka uthathele ingqalelo ezinye zezi mpawu zilandelayo. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukukhetha eyona ilungileyo kwaye ilungele ukusetyenziswa kwakho:
Ufuna ntoni i-oscilloscope? Kubalulekile ukumisela ukuba uza kuyisebenzisela ntoni na, kuba i-oscilloscope yokuhlalutya iisekethe zedijithali kwinqanaba le-logic ayifani ne-RF, okanye kufuneka uthuthe ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, njl. Ukongeza, kukwabalulekile ukufumanisa ukuba uyayifuna ukuba isetyenziswe ngobuchwephesha okanye kusetyenziso lokuzonwabisa. Kwimeko yokuqala, kufanelekile ukutyala imali kancinci ngakumbi ukuze ufumane isixhobo sobuchwephesha kunye nesichanekileyo. Kwimeko yesibini, kungcono ukhethe into enexabiso eliphakathi.
Bhajethi: ukwazi ukuba ungakanani utyalo-mali kwisixhobo sakho kuya kukunceda ulawule iimodeli ezininzi ezingaphandle kwebhajethi kwaye ziya kunciphisa uluhlu olunokwenzeka.
Ububanzi (Hz): Imisela uluhlu lweempawu onokuthi uzilinganise. Kuya kufuneka ukhethe i-oscilloscope ene-bandwidth eyaneleyo yokubamba ngokuchanekileyo ezona zihlandlo ziphezulu zeempawu oza kusebenza nazo. Khumbula umgaqo we-5, okukukhetha i-oscilloscope, kunye ne-probe, inikezela ubuncinane ngamaxesha angama-5 ubuninzi be-bandwidth yesiginali odla ngokuyilinganisa ngeziphumo ezilungileyo.
Ixesha lokunyuka (= 0.35/Bandwidth): Kubalulekile ukuhlalutya i-pulses okanye amaza angama-square, oko kukuthi, iimpawu zedijithali. Okukhona ikhawulezayo, kokukhona ichaneka ngakumbi imilinganiselo yexesha. Kuya kufuneka ukhethe imida enamaxesha okunyuka angaphantsi kwe-1/5 amaxesha elona xesha likhawulezayo lokunyuka kophawu oza kulisebenzisa.
probes: Kukho ezinye ii-oscilloscopes ezineprobe ezininzi ezikhethekileyo kwiimfuno ezahlukeneyo. Uninzi lwee-oscilloscopes zanamhlanje ngokuqhelekileyo ziza ne-impedance passive probes ephezulu kunye ne-probes esebenzayo yemilinganiselo ephezulu yefrikhwensi. Kuluhlu oluphakathi kungcono ukhethe iiprobes kunye nemithwalo ye-capacitive <10 pF.
Ireyithi yesampulu okanye amaxesha amaninzi (Sa/so Samples ngeSekondi): iya kugqiba ukuba mangaphi amaxesha iinkcukacha okanye amaxabiso amaza aya kulinganiswa afakwe kwiyunithi yexesha. Iphezulu, ngcono isisombululo kwaye ngokukhawuleza iya kusebenzisa imemori. Kuya kufuneka ukhethe i-oscilloscope enobuncinci amaxesha ama-5x elona xesha liphezulu lesekethe oya kuyihlalutya.
Ukuqalisa okanye ukuxhokonxa: Eyona nto ingcono ukuba inikezela ngezivuseleli eziqhubela phambili ngakumbi kwiifom zamaza ezintsonkothileyo. Okukhona kungcono, kokukhona uya kukwazi ukubona izinto ezingaqhelekanga ekunzima ukuzifumana.
Ubunzulu benkumbulo okanye ubude berekhodi (iipt): Okukhona, isisombululo esingcono kwiimpawu ezinzima. Ibonisa inani lamanqaku anokugcinwa kwinkumbulo, oko kukuthi, amandla okugcina iziphumo zangaphambili ngelixa usenza umfuniselo. Inani lokufundwa linokurekhodwa kwaye onke amaxabiso anokubonwa ukwenza izigqibo ezichanekileyo okanye ukulandelela.
Inani leendlela: Khetha i-oscilloscope enenani elifanelekileyo lamatshaneli, amajelo amaninzi, iinkcukacha ezininzi zinokufunyanwa. I-analog isetyenziselwa ukuba ibe ngamajelo e-2 kuphela, ngelixa i-digital ingahamba ukusuka kwi-2 ukuya phezulu.
Ujongano: Kufuneka kube lula kwaye kube lula, ngakumbi ukuba ungumqali. Ezinye ii-oscilloscopes eziphucukileyo zilungele kuphela iingcali, kuba umsebenzisi onamava angafunekiyo afunde rhoqo le ncwadana.
I-Analogs yedijithali: iidijithali okwangoku zilawula kwimarike ngenxa yeenzuzo zazo, ezifana nokuvumela ukukhululeka okukhulu, kwaye ngaphandle kwemida kubude berekhodi. Ke ngoko, ukhetho olukhethiweyo kufuneka lube yi-oscilloscope yedijithali phantse kuzo zonke iimeko.
Iimpawu: ezona mpawu zeoscilloscope zibalaseleyo yiSiglent, Hantek, Rigol, Owon, Yeapook, njl. Ngoko ke, ukuthenga enye yeemodeli zabo kuya kuba sisiqinisekiso sokusebenza kakuhle kunye nomgangatho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Izinto zombane » Ii-oscilloscopes ezilungileyo zeeprojekthi zakho ze-elektroniki